Uhambele eDe Doorns uJoemat-Pettersson | isiZulu
Uhambele eDe Doorns uJoemat-Pettersson
Cape Town - UNgqongqoshe woMnyango wezeMvelo uTina Joemat-Pettersson uhambele epulazini eHex River Valley, eWestern Cape, ukuyokhuluma nababhikishi abathukuthele abasebenza kuleli pulazi lamagilebhisi.
Umkhulumeli wakhe uPalesa Mokomele uveze ukuthi ungqongqoshe uzokuba nomhlangano nezinhlaka ezimele ababhikishi eWorcester, bese edlula aye eDe Doorns, ukuyohlangana nabasebenzi.
Sekuphele isikhathi esiyisonto abasebenzi bebhikishela ukwenyuselwa amaholo, abafuna asuke ku-R69 ngosuku, abe ngu-R150.
Abasebenzi abaningi abangekho esitelekeni, kuthiwa bathole ukwesatshiswa, bayishumi abantu ababoshwe ngamaphoyisa, uMokomele uthe kuphenywa ngezinye izehlakalo zodlame lwababhikishi ekuke kwabikwa ngazo.
Amaphoyisa ayakuphika ukuthi ahlukumeze ababhikishi abakade bebhikisha ngoLwesibili ekuseni, umbiko uthi uMasipala waseWitzenberg, uhlanganisa umbiko ngezehlakalo zodlame eziqubuke kule ndawo ngenxa yemibhikisho.
Inhlangano emele abasebenzi i-Agri Wes-Cape, ithi kumele abanikazi bamapulazi basukume kungaze kushube kakhulu isimo, okhulumela inhlangano uCarl Opperman ucele ukuthi kube nokubonisana phakathi kwabaqashi banabasebenzi.
Inhlangano iBlack Association of the Agriculture Sector (Bawsi), igxeke abalimi yathi ababanakekeli absebenzi, kunjalo bathola ukwesatshiswa.